Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny rongony any vaovao York
Tamin'ny faran'ny volana martsa 2021, dia nanara-dalàna ny fivarotana rongony ho an'ny olon-dehibe mihoatra ny 21 taona i New York. Na izany aza, ny varotra dia tsy hampanan-kery raha tsy amin'ny farany- amin'ny taona ho avy, miaraka amin'ny vinavina manantena ny tsena hahatratra mihoatra ny $ 1.2 miliara ny varotra amin'ny taona voalohany. Amin'izany lafiny izany, raha mipetraka ao amin'ny Fanjakana Empire ianao ary te-ho tonga mpandraharaha rongony, ny fahalalana ny fahazoana fahazoan-dàlana rongony any New York angamba no ataonao lohalaharana.
Eo am-piandrasana ny volavolan-dalàna dia mila miomana ny tenany amin'ny fikirakirana fampiharana. Na dia tsy antenaina hisokatra farafahakeliny herintaona aza ny orinasa vaovao dia hanomboka haingana kokoa ny fizotry ny fahazoan-dàlana.
Karazana fahazoan-dàlana rongony misy any New York
Araka ny voalazan'i Bill S854, misy karazany valo ny fahazoan-dàlana rongony hampiasa olon-dehibe any New York:
Fahazoan-dàlana hiasa amin'ny olon-dehibe
Fahazoan-dàlana amin'ny fiaraha-miasa madinidinika
Fahazoan-dàlana hizara mpaninjara
Fahazoan-dàlana hampiasaina amin'ny fivarotana lehibe ampiasain'ny olon-dehibe
Fahazoan-dàlana momba ny mikraoba
Fahazoan-dàlana ho an'ny gama New York
Fandoavana lisansa ho an'ny orinasa rongony any New York
Ny Birao mifehy ny rongony dia miandraikitra ny fametrahana ny sarany momba ny fahazoan-dàlana. Ny sarany fahazoan-dàlana ho an'ny fahazoan-dàlana rongony ampiasain'ny olon-dehibe dia mbola tsy navotsotra, noho izany dia mila mailo ianao amin'ny vaovao rehetra momba an'io. Tsy misy fomba hahafantarana marina hoe ohatrinona ny saram-pisoratana anarana, satria ny fanjakana sasany dia mitentina dolara roa, raha toa kosa ny fanjakana hafa dia mitaky vola an'aliny.
Ahoana ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana rongony any New York?
Raha te hijery ireo fepetra manokana napetrak'i Bill S854 ianao dia azonao atao ny mijery ny “Fampiharana mari-panafarana rongony any New York”Lahatsoratra. Misy ihany koa ny fepetra manokana takian'ny mpangataka arakaraka ny karazana fahazoan-dàlana tadiavina.
Amin'ny ankapobeny, ny Birao mifehy ny rongony dia tsy maintsy mamorona fitsipika mamaritra raha tokony homena fahazoan-dàlana ny mpangataka iray, miorina amin'ny fenitra manokana ireo fitsipika ireo, indrindra ny momba ny mombamomba ny mpangataka sy ny fahaizany mitondra ilay asa.
Amin'io lafiny io dia takiana amin'ireo mpangataka ny hamoaka ireto manaraka ireto:
Fampahalalana momba ny mombamomba azy ireo (ao anatin'izany ny fahasamihafana ara-pirazanana sy ara-poko)
Fampahalalana momba ny fananana sy ny fampiasam-bola
Porofon'ny fitondran-tena tsara
Ary koa, ny mpangataka dia mila mitazona fifanarahana fandriam-pahalemana miaraka amin'ny fikambanana mpiasan'ny asa.
Misy ihany koa ny fetra fototra napetraka ao amin'ny S854:
Tsy misy fahazoan-dàlana isan-karazany azo omena olona latsaky ny roa amby roapolo taona, ary tsy mahazo mampiasa olona latsaky ny roa-polo taona.
Tsy misy mpanana fahazoan-dàlana afaka mivarotra, manatitra, na manome na miteraka na manome alalana na mividy na amidy na amidy na rongony na amin'inona na amin'inona, raha ny marina na toa, latsaky ny roa-polo taona raha tsy ny olona latsaky ny roa-polo taona -ny iray dia marary voamarina ihany koa ary ny manana fahazoan-dàlana dia nahazo alalana araka ny tokony ho izy tamin'ny andininy fahatelo amin'ity toko ity.
Ny birao, amin'ny tolo-kevitry ny birao dia manana fahefana hametra, amin'ny alàlan'ny canopy, isan'ny zavamaniry, rakitsary na fomba hafa, ny habetsaky ny rongony avela hambolena, hikirakira, hizara na hamidin'ny tompon'ny fahazoandàlana.
Ny fahazoan-dàlana rehetra dia tapitra roa taona aorian'ny datin'ny famoahana.
Fepetra takiana manokana any New York
Ilaina ny drafi-pandraharahana rongony, satria izy io no làlan'ny orinasa rongony.
Inona avy ireo fahazoan-dàlana azonao ampiharina miaraka?
Araka ny S854 dia mila mangataka fahazoan-dàlana hafa ianao raha mikasa ny hiasa amin'ny toerana samihafa. Midika izany fa fahazoan-dàlana isaky ny toerana fotsiny no azonao. Na izany aza, ny fahazoana licence sasany dia mandrara anao hangataka karazana lisansa hafa miaraka:
Lisansa mpamboly ampiasain'ny olon-dehibe: Mety tsy mahazo fahazoan-dàlana hizara
Fahazoan-dàlana hampiasaina ho an'ny olon-dehibe: Mety tsy mahazo fahazoan-dàlana hizara
Lisansa mpizara ho an'ny olon-dehibe: Mety tsy manana fahazoan-dàlana amin'ny famarotana antsinjarany koa na manana zana-bola mivantana na ankolaka amin'ny dispensary fivarotana iray.
Fahazoan-dàlana hampiasaina amin'ny fivarotana lehibe ampiasain'ny olon-dehibe: Mety tsy manana fahazoan-dàlana ampiasaina amin'ny olon-dehibe, fikirakirana, orinasa bitika, fiaraha-miasa na mpizara ihany koa.
Lisansa microbusiness: Mety tsy hanana tombontsoa amin'ny fahazoan-dàlana hafa.
Lisansa fandefasana: Mety tsy hanana zana-bola na fanaraha-maso momba ny fahazoan-dàlana mihoatra ny iray.
Fahazoan-dàlana hiara-miasa amin'ny olon-dehibe amin'ny orinasa lehibe: Mety tsy manana fahazoan-dàlana amin'ny fivarotana antsinjarany na manana zana-bola mivantana na ankolaka amin'ny fizarana fivarotana antsinjarany.
Fahazoan-dàlana hampiasa amin'ny olon-dehibe eo an-toerana: Mety tsy manana dispensary, fambolena, fanodinana, microbusiness, fiaraha-miasa na mpaninjara ampiasain'ny olon-dehibe. Ary koa, ny olona iray dia mety tsy manana afa-tsy fahalianana mivantana na ankolaka amin'ny fahazoan-dàlana fanjifana ampiasain'ny olon-dehibe eo an-toerana.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny zavatra azonao atao ianao mba hananana fanajana ny indostrian'ny rongony any New York, aza misalasala Mifandraisa aminay.
Tags:Fahazoan-dàlana ho an'ny rongony any New York, Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny rongony any New York, Fanamafisana ara-dalàna ny rongony any New York